Ukuphupha isikhokelo Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ukuba abantu balandela umkhondo, sinokukwenza kuphela kwiitreyini ezibonakalayo kuthi emhlabeni, ezinje ngeenyawo okanye imikhondo yezilwanyana. Iingcali zokulandela umkhondo zingasebenzisa umkhondo emhlabeni ukubona ukuba zeziphi na izilwanyana ezizakubelwa zona.
Lo mahluko unzima ngakumbi ebantwini. Xa kufikwa ekuchongeni umntu ngesiseko seenyawo ezikhoyo okanye ukulandela umkhondo wabo, ithuku lomntu lilinganiselwe ngokukhawuleza. Ke, apha kusetyenziswa izinja ze-sniffer eziqeqeshwe ngokukodwa. Banokukhangela umkhondo ngeempumlo, bathathe ivumba lomntu ofunwayo kwaye basebenzise ukuqala ukuleqa.
Inja nayo ibaluleke kakhulu xa izingela. Nceda umzingeli afumane izilwanyana ezigulayo okanye ezenzakeleyo angenakuze azifumane ngokwakhe. Kodwa nokuba asizingeli, singaphupha "uphawu" lwephupha. Inqaku elilandelayo licacisa ukuba ngokwahlukileyo nangokwahlukileyo lo mfanekiso wephupha kufuneka utolikwe njani.
1 Uphawu lwephupha «icebo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umkhondo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umkhondo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «icebo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba umntu ulandela umkhondo wesilwanyana ephupheni lakhe aze alilandele, uyaphumelela ngokotoliko lwamaphupha ngokubanzi. Utshaba umzabalazo. Umntu kusenokwenzeka ukuba ajongane noku ngokuvuka kobomi ixesha elide. Iphupha linobutshaba kakhulu kulo mntu kwaye ugcwele iimvakalelo zenzondo kangangokuba ebhenela kuzo zonke iindlela ezinokucingwa zokubona utshaba lusemhlabeni.
Ukuba, ngokuchaseneyo, ulandela umkhondo womntu, isiphelo esimnandi nesimnandi kakhulu ngalo mxholo uphuphayo. Yaziwa ngokuphupha. Ukubona umkhondo ngohlobo lweenyawo kukwabonisa ukuba amaphupha kungekudala aza koyisa ubunzima bemihla ngemihla bebodwa.
Uphawu lwephupha «umkhondo» - ukutolikwa kwengqondo
Ukulandela umkhondo ephupheni kuhlala kufumaneka kutoliko lwengqondo ngephupha lokuzikhangela okanye umnqweno Ukuqonda ngomnye umntu. Ukulandela umkhondo kubandakanya neenjongo ezimbi zomntu ophuphayo. Ngokunokwenzeka umphuphi ngumntu onomona kakhulu. Ujonge iqabane lakhe lonke inyathelo lendlela kuba eziva engcatshiwe kwaye eqhathiwe nguye. Umntu ekuthethwa ngaye ulandela umkhondo ephupheni kuba ujonge ngononophelo olukhulu kwiimpawu zenkohliso yokwenene ebomini bokuvuka.
Ukuba ulandela umkhondo wesilwanyana ephupheni, uyakufuna ukuphuma kwindawo okuyo ngoku, ngokutolika kwengqondo yamaphupha. Unokuziva ungaphandle kwendawo okuyo. Ukuphupha kunoluvo lokuba awunakho ukuzichaza uqobo. Ukulandela umkhondo wezilwanyana kukwavuselela umnqweno Libertad y Ukuzimisela ukubonisa.
Uphawu lwephupha «umkhondo» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokomoya yokujonga ukutolika kwephupha, umfanekiso wephupha "umkhondo" ubhekisa kubugcisa bamandulo bokulandela. Umntu wakuphuhlisa oku ngenxa yesidingo sokuzibonelela ngokutya. Yamnceda ukuba adibane nendawo emngqongileyo kwinqanaba lokomoya. Ukwazi ukufunda umkhondo ephupheni ke kubandakanya amandla omntu ophuphayo, imiyalezo yokomoya ukwazi ukuqonda nokuqonda.